Disc Fatịlaịza Granulator
Rotary Drum draya
Ájị ebu System bụ akụkụ dị mkpa na dum fatịlaịza mmepụta akara. Anyị na-enye ndị ahịa na-achọ belt ebu na elu nchepụta-n'akuku belt ebu. The mmasị ebu ejikọ isi fatịlaịza ngwá ọnụ, na-eme ihe mfe ngwaọrụ & okokụre ngwaahịa njem. The ihe onwunwe na-ejizi conveyors na-eji mgbada na odida ngwa na-ekwe ka fatịlaịza na-akwakọba mgbe na-akpụ akpụ n'etiti ala ma ọ bụ stacked ebu. Ọ na-azọpụta ọrụ mmanye, oge na ume, na ihe odide nke elu arụmọrụ & mfe ọrụ. Ọchịchọ ebu na ọtụtụ-eji ọ bụghị nanị na compound & organic fatịlaịza mmepụta, ma na osisi & oriri pellets mmepụta akara, nke bụ mgbanwe dị na ahịa chọrọ. The ihe onwunwe na-atara n'ime hopper nke na-ebu. Nke a oriri hopper nwere roba-mmechi efere iji belata ihe onwunwe ọnwụ. Mgbe kara nká, ndị a efere nwere ike mfe a ga-ewepụ. The mmasị belt ebu na-wuru nke chopped igwe anaghị agba ígwè. The etiti dị nke ngalaba na na-bolted ọnụ. The conveyer belt bụ na-ekpo ọkụ ire ere.
Previous: Fatịlaịza Packaging Machine
Ájị Obosara (mm) Ájị Ogologo (m) / Power (kW) Ájị Speed ​​(m / s) Ike (t / h)
Cheta na: n'ezie ike ga-kpebiri site zuru ezu set
1. Kọmpat imewe, adabara ọka, ntụ ntụ ma ọ bụ fatịlaịza ngwaahịa.
Ájị ebu na-emi esịnede rollers na mechiri emechi ebu belt. E nwere ihe abụọ rollers na otu onye bụ maka na-akwọ ụgbọala ebu n'usoro onye ọzọ na-maka na-agbanwe agbanwe moto direction nke ebu. Head ala na-drived site moto ebu na-draged site na ike nke esemokwu nke a na-eme site n'isi ala na ebu. Head ala a na-edoziri na ịrụzu ọgwụgwụ ntọt traction maka a mma na-adọkpụpụta. Ihe nri si oriri ọgwụgwụ na dara na n'usoro ebu belt na atara site ebu nnyefe ọgwụgwụ.
Fatịlaịza Packaging Machine
Mba 58 Xinjinqiao Road, Pudong, Shanghai, China